Kitra eran-tany – «Ballon d’or 2018”: lasan’i Modric ny amboara, tsy nipoitra i CR7 sy i Messi | NewsMada
Tontosa, ny alatsinainy 3 desambra lasa teo, tany Paris, Renivohitr’i Frantsa, ny fanolorana ny “Ballon d’or 2018”, taranja baolina kitra. Voafidin’ireo mpanao gazety 180 maneran-tany sy ireo mpanazatra avy amin’ny vazan-tany efatra hibata izany amboara izany ilay Kroaty, i Luka Modric, irakiraka mpanafika ao amin’ny Real de Madrid. Ny zava-bitany ka nampisongadina azy tamin’ireo lalao rehetra nataony no tena naharesy lahatra ireo mpifidy nahazoany ity “Ballon d’or 2018” ity. Raha tsiahivina, nandrombaka ny tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions”, niaraka tamin’ny Real, ny tovolahy ary niatrika ny famaranana ny “Mondial 2018”, tamin’i Kroasia. Nahazo isa 753 izy, nanoloana an’i Cristiano Ronaldo, isa 476. Fahatelo ilay Frantsay, i Antoine Griezmann, isa 414, narahin’i Mbappé, isa 347. Tany amin’ny laharana fahadimy kosa ilay Arzantin, i Lionel Messi, nahazo isa 280.
Azo lazaina fa tsy nahazaka ny fahareseny, tamin’ity, i Messi sy i Ronaldo, izay efa mpandrombaka matetika ity “Ballon d’or” ity ka tsy niseho tao amin’ny lanonam-panolorana ny amboara. Fihetsika tsy nampiseho “fair-play” ary nanankianan’ny ankamaroan’ireo olona manan-kaja marobe tonga tao an-toerana.
Nomena an’i Kyllian Mbappé kosa ny “trophée Kopa”, natokana ho an’ireo mpilalao latsaky ny 21 taona. I Ada Hegerberg, teratany norvezianina, milalao ao amin’ny Olympique Lyonnais, kosa ny nandrombaka izany ho an’ny vehivavy.